N'ogbe TE ingot na pellets-The BiTe-P/N-1thermoelectric ingot Mmepụta na Factory |Aurin
TE ingot na pellets-The BiTe-P/N-1thermoelectric ingot
Thermonamic nke BiTe-P/N-1thermoelectric ingot na-eto site na alloy nke Bi, Sb, Te, Se, doping pụrụ iche na usoro kristal anyị pụrụ iche.A na-eji ingot thermoelectric nke Bi-Te na-emepụta modul thermoelectric maka ngwa jụrụ oyi na kpo oku, na ịtụgharị okpomọkụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik.N'ozuzu, ọnụ ọgụgụ nke uruZT nke ụdị p-ụdị anyị na ụdị n-ụdị ingots karịrị 1 na 300K, na njirimara dị mma na-adọta ọtụtụ ndị ahịa dị elu.Ka ọ dị ugbu a, a na-egosipụta ingot anyị na ike ọrụ dị mma na nkwụsi ike dị elu, na-enye nkume nkuku maka ịmepụta arụmọrụ dị elu na Peltier jụrụ oyi na modul ike.Enwere ike ịkpụ pellets anyị na 0.2X0.2X0.2MM, okpomọkụ.ọdịiche nwere ike iru 74 ℃.
The TIG-BiTe-P/N-1thermoelectric ingot bụ Thermonamic toro na alloy nke Bi, Sb, Te, Se, pụrụ iche doping na anyị pụrụ iche crystallizing usoro.A na-eji ingot thermoelectric nke Bi-Te na-emepụta modul thermoelectric maka ngwa jụrụ oyi na kpo oku, na ịtụgharị okpomọkụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik.N'ozuzu, ọnụ ọgụgụ nke uru ZT nke ụdị p-ụdị anyị na ụdị n-ụdị ingots karịrị 1 na 300K, na njirimara dị mma na-adọta ọtụtụ ndị ahịa dị elu.Ka ọ dị ugbu a, a na-egosipụta ingot anyị na ike ọrụ dị mma na nkwụsi ike dị elu, na-enye nkume nkuku maka ịmepụta arụmọrụ dị elu na Peltier jụrụ oyi na modul ike.Enwere ike ịkpụ pellets anyị na 0.2X0.2X0.2MM, okpomọkụ.ọdịiche nwere ike iru 74 ℃.
* Ihe ndị chọrọ nlebara anya
Igwe nju oyi nke Semiconductor na-arụ ọrụ na ntinye ọkụ DC, a ga-ejikwa ọkụ pụrụ iche kwado ya.
1. DC ike ọkọnọ.Uru nke ọkụ ọkụ DC bụ na enwere ike iji ya ozugbo na-enweghị ntụgharị.Mwepu bụ na voltaji na ugbu a ga-adabara maka semiconductor coolers, na ụfọdụ nwere ike dozie site usoro na yiri njikọ nke semiconductor coolers.
2. AC ugbu a.Nke a bụ ọkụ ọkụ nkịtị, nke a ga-edozirịrị na DC tupu enwee ike iji ya mee ihe nju oyi.Ebe ọ bụ na ngwaọrụ refrigeration bụ obere voltaji na ngwaọrụ dị ugbu a, a na-ebu ụzọ tinye ya na mbelata voltaji, nhazi na nzacha.N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-agbakwunye nha okpomọkụ, njikwa okpomọkụ na njikwa ugbu a maka ịdị mma.
3. Ebe ọ bụ na a na-enye onye na-ekpo ọkụ nke semiconductor site na DC ọkụ ọkụ, ọnụọgụ ripple nke ike ọkụ ga-abụ ihe na-erughị 10%, ma ọ bụghị ya, ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na mmetụta dị jụụ.
4. Volta na-arụ ọrụ na ugbu a nke igwe nju oyi nke semiconductor ga-egbo mkpa nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ.Dịka ọmụmaatụ, maka ngwaọrụ nwere ụdị tec1-12706, 127 bụ di na nwunye logarithm nke ngwaọrụ jụrụ oyi, PN, na voltaji na-arụ ọrụ nke ngwa nju oyi v = di na nwunye logarithm × 0.11 na 06 na-ahapụ ka ọ gafee nnukwu ụkpụrụ ugbu a.
5. A ghaghị iweghachi ike na n'oge oyi na okpomọkụ nke ngwa nju oyi na ọnụ ụlọ dị na nsọtụ abụọ (n'ozuzu karịa 5 nkeji), ma ọ bụghị ya, ọ dị mfe imebi akara nke ngwa nju oyi na nkwụsị nke seramiiki. mpempe akwụkwọ.
6. The electronic sekit nke semiconductor ngwa nju oyi na-enye ike na-ahụkarị na ike dị na n'ozuzu electronic technology akwụkwọ ntụaka.
Nke gara aga: Usoro ahaziri TE – oyi
Osote: Usoro ọkụ ọkụ TEG
Thermoelectric ikuku ntụ oyi
Thermoelectric oyi efere
Thermoelectric mkpuchi mkpuchi
Thermoelectric jụrụ efere
Thermoelectric jụrụ Sistemụ
Di na nwunye Thermoelectric
Sistemụ jụrụ oyi na-ekpo ọkụ peltier
Ngwa igwe nju oyi peltier